Madaxweynaha Puntland oo shaqada ka ceyrshay saraakiil katirsan ciidamada - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandMadaxweynaha Puntland oo shaqada ka ceyrshay saraakiil katirsan ciidamada
October 27, 2018 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Puntland ayaa shaqada ka ceyrshay todobo sargaal oo katirsan ciidamada Daraawiishta, sida lagu sheegay bayaan kasoo baxay xafiiska madaxtooyada.
Bayaanka ayaa lagu sheegay in saraakiisha ay ku xadgudbeen anshaxa ciidamada Puntland.
Magacyada saraakiisha la ruqseeyay ayaa kala ah:
2.G/Sare Maxmed Cali Qase
Sidoo kale, bayaan kale oo kasoo baxay xafiiska madaxweynaha ayaa Axmed Cabdullaahi Samatar oo loo yaqaan Layli looga ceyrshay shaqada ciidamada booliiska, isaga oo sidoo kale lagu eedeeyay in uu ku kacay falal lidi ku ah jiritaanka Puntland iyo anshaxa ciidanimo.
Layli iyo saraakiisha kale ee la ruqseeyay ayaa dhawaan shir jaraaid oo ay ku qabteen Garoowe ku muujiyay taageero ay u hayaan Dowladda Federaalka Soomaaliya.
Garowe-(Puntland Mirror) Ku dhawaa 1.6 milyan oo qof oo ku sugan 234 meelo oo kuyaala Puntland ayaa wajahaya abaar, madaxtooyadda Puntland ayaa bayaan ku sheegtay Khamiistii. Bayaanka ayaa intaas ku daray in xaalada abaarta laga [...]
Kismaayo-(Puntland Mirror) Doorashada madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland ayaa dib loo dhigay muddo saddex beri ah, sida ay sheegeen guddiga doorashooyinka. Bayaan ay soo saareen xalay goor dambe, guddiga doorashooyinka Jubbaland ayaa sheegay in ujeedadu tahay [...]